Iwo akanakisa ekushamwaridza nhoroondo
Yekushamisira yeruzivo wongororo
Iwo 3 akanakisa adventure mabhuku
Mabviro ezvinyorwa anoenderana nerudzi rwekunakidzwa. Avo nhasi anozivikanwa semabhuku makurusa ezvinyorwa zvepasi rose anotitora parwendo kupinda muzviuru zvine ngozi uye zviwanikwa zvisingafungidzirwe. Kubva kuUlysses kuenda kuDante kana Don Quixote. Uye zvakadaro nhasi iyo adventure genre ...
3 akanakisa mabhuku aClive Cussler
Kana paine munyori wazvino wekutamba uyo achakabata rudzi rwechiitiko mukati mevatengesi, ndiClive Cussler. Kufanana naJules Verne wemazuva ano, munyori uyu akatitungamira kuburikidza neanoyevedza ezviitiko zvine ruzivo uye zvakavanzika semabhonzo emusana. Chokwadi…
Mabhuku matatu akanakisa naAlberto Vázquez Figueroa
Kwandiri, Alberto Vázquez-Figueroa aive mumwe wevanyori veshanduko, mupfungwa yekuti ndakamuverenga neshungu semunyori mukuru wekumhanya-mhanya, ndichiri mudiki. Ndichangobva kudzoka kwaari nekuda kwebhuku rake rekupedzisira Goodbye Mister Trump, umo ndakasimbisa kuti ...
Iyo huru yero njodzi, naJJ Benítez
Vashoma vanyori munyika vanoita basa rekunyora nzvimbo yemashiripiti sezvinoitwa naJJ Benítez. Nzvimbo inogarwa nemunyori nevaverengi uko chokwadi nenhema zvinogovana dzimba dzinowanikwa nekiyi dzebhuku rega rega nyowani. Pakati pemashiripiti uye kushambadzira, pakati pekuvhiringidza uye ...
Mutauro wakavanzika wemabhuku, naAlfonso del Río
Ndinoyeuka Ruiz Zafón. Zvinoitika kwandiri pese pandinoona inoverengeka inonongedza kune esoteric chikamu chemabhuku, kune yakavanzika mitauro, kune iro hwema hwehungwaru hwakaunganidzwa pamashefu asingaperi, pamwe mumakuva matsva emabhuku ... Uye zvakanaka kuti zvive saizvozvo. Kufungidzira kukuru kwemunyori wechiCatalan ...
Mengele Zoo naGert Nygardshaug
Ino inguva yakanaka nguva yekudzidza kuda kuziva kwakadai se "Mengele Zoo", chirevo chakagadzirwa muchiBrazilian Portuguese chinonongedzera kunyonganiso yechinhu chero chipi zvacho, pamwe nechirevo chakashata chechiremba anopenga uyo akapedza mazuva ake pamudyandigere chaizvo muBrazil. Pakati peyakasviba nhema uye isina fungidziro fungidziro ye ...
Vozdevieja, naElisa Victoria
Ndiani asingayeuke Elvira Lindo's Manolito Gafotas? Izvo hazvisi kuti inyaya yekuita cyclically kuve mufashoni nezve vana protagonists mumanovel evose vateereri. Ndiwo mubvunzo uyo kuti munguva yake Elvira uye Zvino Elisa, nehukama hwake ...
Kure kure, naHernán Díaz
Zvinogara zvakanaka kusangana nevanyori vane hushingi, vanokwanisa kutora basa rekuudza nyaya dzakasiyana, kure nekure kwemazita akabaiwa se "anovhiringidza" kana "matsva." Hernán Díaz anopa iyi nyowani nekusavimbika kusingarambiki kwemumwe munhu anonyora chimwe chinhu kungoitira icho, nechinangwa chekudarika muchimiro uye chimiro, mashiripiti kugadzirisa ...
Oliver Twist, naCharles Dickens
Charles Dickens ndomumwe wevanyori veChirungu vanyori venguva dzese. Yakanga iri panguva yeVictorian era (1837 - 1901), iyo nguva iyo Dickens akararama nekunyora, kuti inova runyorwa rwakave runyorwa rwemhando. Dickens ndiye quintessential mudzidzisi wekushoropodzwa kwevanhu, pa ...